सरकार चलाख छ !
निर्भीकजंग रायमाझी काठमाडाैं, २६ असाेज
‘इङ्लिसम्यान इज बर्न फर रुल’, अर्थात् अंग्रेजहरू शासन गर्नकै लागि जन्मेका हुन् । तत्कालीन बेलायती साम्राज्यले विश्वको एकतिहाइ भू–भागलाई उपनिवेश बनाएको समयमा यो भनाइ प्रचलित थियो । औद्योगिक क्रान्तिको सफलताले चुलिएको बेलायती साम्राज्य व्यापारको नाममा शासन गर्न विश्वभर फैलिएको थियो ।
राजनीतिशास्त्रले भन्छ, ‘राजनीति चलाखीले होइन, इमानदारिताले गर्नुपर्छ ।’ राजनीतिशास्त्रको यो भनाइ व्यावहारिक रूपमा गलत छ । व्यावहारिक रूपमा मात्रै होइन, राजनीतिक रूपमै पनि यो भनाइ गलत छ भन्ने तथ्य मेकियावेलीले उहिल्यै आफ्नो निबन्ध ‘द क्वालिटिज अफ प्रिन्स’मा लेखिसके ।
इमानदारिताको भावुक आवरणमा छोपिएको चलाखीले सत्ता चल्छ । कानून र शासनको आवरणमा ढाकिने अपराध र हिंसाको जगमा सत्ताको मियो डुबेको हुन्छ । समृद्धि, विकास, खुसहाली, उन्नतिको गुलियोमा सत्ताको विष छोपिएको हुन्छ ।
त्यसैले सत्ता इमानदार होइन, चलाख हुन्छ । शासक इमानदार हुँदैनन् । छट्टु हुन्छन् । इमानदारिताको मुकुण्डो लगाएर सत्ताले आफ्नो बेइमानी अनुहार ढाक्छ । सत्ताको यो चरित्रलाई तपाईं सिसिफसियन प्रयास भन्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईंलाई थाहा छ, सत्ता बेइमान छ । सत्ता चलाख छ । तर, पनि तपाईं इमानदार जस्तो बनिदिनुहुन्छ । चलाखी, बेइमानी र इमानदारीको कक्टेलमा टिकेको हुन्छ सत्ता ।
यो भूमिका बिट मारौं । उदाहरणतर्फ केन्द्रित होऔं ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको दुईदिने भ्रमणका क्रममा नेपालले गज्जब चलाखी देखायो । हुँदै नभएको शान–ओ–शौकत देखाउने प्रयास गर्यो ।
तपाईं तर्क गर्नुहोला, छिमेकीलाई आफ्नो घरमा बोलाउँदा तामझाम त गरिन्छ नै भनेर । तर, भैंसी नै नपालेको घरमा आएका पाहुनालाई घिउ खुवाउन खोज्नु कतिसम्म ठीक हो ?
राज्य सञ्चालन र घरव्यवहार सञ्चालनमा केही भिन्नता छन् । केही समानता पनि छन् । घरकै बृहत् रूप हो राज्य । सामान्यतः घर र छिमेकी बदल्न सकिदैन । जन्मेको घर फेर्न मिल्दैन । बरु आफूले पाएको घर र छिमेकीलाई आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म आफूअनुकूल बनाउन सकिन्छ ।
तर, हामी भने आफू छिमेकी अनुकूल भइदिन्छौं । आफू अनुकूल छिमेकी बनाउँदैनौं । अर्थात् हामी आफूलाई छिमेकी अनुकूल रुपान्तरण गर्छौं ।
सरकारले चलाखीपूर्वक चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई झुक्यायो । कूटनीतिक चलाखी र द्विपक्षीय सम्झौतामा गरेका चलाखी त छँदैछन् । यसअगाडि स–साना कुरामा पनि सरकारले उखान–टुक्का प्रयोग गर्दै चलाखी देखाउँथ्यो ।
यसपटक उखान–टुक्का त लगाउन सकिएन । बरु हतारोको विकासे रूप देखाइयो । जसरी उखान र भाषणमा समृद्धि सुनाइन्थ्यो ।
चिनियाँ महामहिमको स्वागतमा राताराता बाटो कालोपत्र गरियो । प्रधानमन्त्री आफैं कालोपत्र गरिएको बाटो निरीक्षण गर्न गए ।
तौबा ! तौबा !
प्रधानमन्त्री इन्जिनियर पनि भइगए ।
यो रातारात टालेको बाटो १० रात टिक्ला त ? यो बाटो पनि हास्यरस मिसिएको प्रधानमन्त्रीको भाषणजस्तै हो । मतलब भाषण सुनुञ्जेल मजा आउँछ । हाँसो, ताली सुनिन्छ । तर, एकैछिनपछि यथार्थ रूप देखिन्छ । सी होउञ्जेल बाटो रंगिन देखिन्छ । उनी गएको भोलिपल्टै बाटोको रङ पनि उड्छ ।
वर्षौं सुतिबस्ने सत्ता अचानक जाग्छ, कुम्भकर्णको निन्द्राबाट । सडकमा खाल्टा भए । समस्या भयो भन्दा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘मैले बनाएको हो र सडकमा खाल्टा ?’
चिनियाँ समृद्धिका अगाडि आफ्नो हीनता, दीनता र गरिबी छोप्न सत्ताले फूलका हाँगा काट्यो । हजारौं रुखका हाँगा काटेर लाज छोप्यो । भ्वाङ परेको लुगामा रंगीविरंगी टाला हालेजस्तै सडक टाटेपाटे बनायो । एकैछिन सही, लाज छोपियो ।
‘लाटो लड्छ एक बल्ड्याङ, बाठो लड्छ दुई बल्ड्याङ’ उखानै छ । (माफ गर्नुहोला, उखानका उस्तादलाई उछिन्न खोजेको होइन) डिजिटल विश्व र प्रविधिमा दुनियाँलाई माथ दिने चीनलाई हामीले सडक किनारमा राखेर उसैले उत्पादन गरेका डिजिटल बोर्ड देखायौं ।
सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदा पनि हामीले प्लेक्समा राखेर देखायौं । वर्षौंदेखि विवादास्पद तीनकुने चौरलाई कृत्रिम हरियाली दिलायौं ।
सन् २००८ को ओलम्पिकमा चीनले एकठाउँको बादल अर्कै ठाउँमा लगेर वर्षा गराएको विश्वले भुलेको छैन । कृत्रिमताको माहिर उत्पादकलाई हामीले आफ्नो नक्कली औकात देखायौं ।
शक्तिको सामु झुक्ने मान्छेको आदत आजको होइन । चाणक्यले भनेका छन्, ‘प्रतापि राजाका अगाडि अन्य राजा राजौटा झुक्ने गर्छन् । जसरी जून उदाएपछि ससाना तारा आफैं छायाँमा पर्छन् ।’ यस्तै भयो सीका अगाडि हाम्रो हालत ।
आर्थिक शक्तिसँगै सामरिक शक्तिमा चीन निकै शक्तिशाली छ । यस्तोे विशिष्ट देशका राष्ट्रप्रमुखको भ्रमणका लागि ठूलो तयारी गर्नु अनौठो होइन । तर, त्यो तयारीका पछाडि लुकेको हीनताबोध र मगन्ते चाह हाम्रो सत्ताको रूप हो ।
सी चिनफिङ आउँछन्, रेल बनाइदिन्छन् । तेल ल्याइदिन्छन् । भत्केका दरबार बनाइदिन्छन् । बाटो, पुल, भवन, बसपार्क बनाइदिन्छन् भन्ने मानसिकता बोकेर सत्ताले सीको स्वागत गर्यो । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले सीलाई गरेको सम्बोधन नै मगन्ते छ ।
बलियोको महिमा गाउनु निर्धोपनको प्रतीक हो । हनुमानगिरीको उत्कर्ष हो । टक्कर लिन सकिँदैन भने मौन बस्नु राम्रो हो । एउटा छिमेकीका लागि राष्ट्रवादको अस्त्र प्रयोग गर्नु, अर्को छिमेकीका लागि राष्ट्रवादको तिलाञ्जलि दिनु चलाखी होइन, लम्पसारवाद हो ।
स्वावलम्बी भएर बाँच्नु पनि शक्तिशाली हुनु हो । विकासको मोहजालमा परेर छिमेकीको मुख ताक्नु लाचारी हो । फ्लेक्स, डिजिटल बोर्ड, टाटेपाटे सडक र कृत्रिम बगैंचाले हाम्रो यथार्थ छोपिँदैन । यथार्थमाथि टालो हाल्नु, पर्दा लगाउनु आफैंमाथिको अविश्वास पनि हो ।
राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा नेपाल सरकार र त्यसको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सबै चालढाल हेर्दा शक्तिको भक्ति गरेको देखिएकै छ ।
स्वागतमा केही बिगार भइहाल्ला कि, मानप्रतिष्ठामा केही कमी पो भइजाला कि भनेर सरकार झस्किरह्यो । यदि चीन हाम्रो छिमेकी हो भने त ऊसँग अपनत्वको आभाष गरेर निर्धक्क हाँस्न सकिन्छ । सारा दुःखसुख बाँडेर सह–अस्तित्वका लागि लडेर बाँच्न सकिन्छ ।
यथार्थमाथि टालो हालेर समृद्धि देखाउनु पर्दैन । देशलाई भीखमंगा मुक्त बनाउँछु भन्ने प्रधानमन्त्री आफैंले माग्न हात बढाउनु पर्दैन ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, असोज २६, २०७६, ०७:३०:००
सामाजिक सञ्जालमा एमसीसीको मजाक
सरी ! छोरा
अत्याचारी शासक चितुवाभन्दा भयानक हुन्छ
गुमनाम लेखक जो पैसाका लागि लेख्छन्
‘शिरीषको फूल’की सकमबरीको याद आइरहन्छ
रसरंग र किनमेलको चाड
शेखर खरेलका मनप्रिय ३ पुस्तक र कारण
जब भीटेनलाई काकाले घरबाट निकालिदिए...
आज दिनभर : कांग्रेस कार्यालय बन्यो रणमैदान, नेकपामा झाङ्गिए गुट
बैतडीमा नहरमा डुबेर एक बालिकाको मृत्यु
सामुदायिक वनका अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पक्राउ
भोजपुरका ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्यो विद्युत् सेवा